China 2020 yepamusoro yepamusoro rectangular foam tubing kupisa shrinkable silicone rubber tube mu china Kugadzira uye Fekitori | Jujie
Washington City Offices rakarukwa hosipaipi
Foamed silicone rabha
Yakaumbwa silicone zvigadzirwa
Silicone yakapetwa mhete yekuisa chisimbiso
Silicone inonamira yekuisa chisimbiso tepi
Silicone yekuzvinamatira tepi
2020 yemhando yepamusoro rectangular foam tubing kupisa shrinkable silicone rabha chubhu muChina
tsvuku, bhuruu, chena, nhema, yero, ect
furo silicone mitsetse
saizi yakaenzana / isina kumira
madhoo nemaWindows, michina, etc.
Minimum yekuraira huwandu:
Makirogiramu makumi maviri
2019 yepamusoro yepamusoro rectangular foam tubing kupisa shrinkable silicone rabha chubhu muChina
Chigadzirwa tsananguro yefuro silicone mitsetse
Paunenge uchida kuita kwakakwirira kuita furo silicone zvigadzirwa zverabha, vimba nemhando nehunyanzvi isu tinoratidzira pano kualibaba. Kunogara uye kwakavharwa nenyama. Inobata ichipesana netembiricha dzakanyanya uye dzakadzika kwazvo Haiti kuitisa magetsi. Pano paJujie, isu takarumbidza maitiro edu ekugadzira kusvika pakukwana kuratidza chigadzirwa chemhando yepamusoro isu tine chokwadi chekuti muchagutsikana nacho. Tinosangana ISO 9001: 2015 zviyero. Isu tinopa sarudzo dzenguva dzose dzekutenga pamwe nesarudzo dzekutenga dzakawanda.
kupisa kunodzivirira silicone foam tubing
Tembiricha renji: -40 ℃ - 200 ℃
Yakave yakanyatsogadziriswa, isina muchetura, yakanaka isina kupisa, kukwegura kuramba, inogona kutakura tembiricha 200, yakakwira uye yakakwira voltage.
Iyo yakapusa pamusoro, yakapfava uye inochinjika.
Inokodzera kabhineti, mota, mudziyo, kupopera, firiji, kushongedza, madhoo neWindows, michina. Zvepamusoro zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvinogona kugadzirwa kuita machubhu uye zvinogadzirwa zvinoenderana neyakajairwa.
Kuwandisa kweanenge 0,8, nekukurumidza kudzokorodza, kwakadzika kupisa kupisa.
Unogona kudhinda logo yako pairi nemaki, uye zvimwe zvinodiwa
Unogona kukupa muyenzaniso izvo zvichave zvinoenderana nezvaunoda, senge saizi, ukobvu, ruvara, uye kuomarara.
Chigadzirwa zvigadzirwa: 1.High tembiricha kuramba,Low tembiricha nemishonga.
3. Chisimbiso nani.
4.Technology yakura, yakagadzikana mhando.
5. Inogona kuve yakagadzirirwa isina-mwero zvikamu.
6. Saizi chaiyo.
Furo silicone rabha chisimbiso ((mm) Furo silicone rabha chubhu (mm)
Round bar Square bhaa Yakafanirwa bar Zvinoenderana neodha yekugadzira.
φ2 8 × 8 P mhando
φ3 8 × 10 Triangle mhando
φ4 10 × 10 Tsananguro dzakasarudzika dzinogona kuvezwa kuti dzive neruvara, dzakasiyana mhando dzerudzi
-20 30 × 50
Mutengo ndewekureva chete, mutengo chaiwo unobva pane chaicho chigadzirwa.
Mufananidzo wa foam silicone mitsetse
Zvakafanana zvigadzirwa zve furo silicone mitsetse
Tarira: 1. Dhata rese rinowanzoshandiswa.
2. Ruvara rwakakosha, dhayamita yakakosha, nezvimwe zvinogona kugadzirwa maererano
Zvimwe zvakawanda zvekambani uye zvigadzirwa zvedu, Dzvanya pane iyo logo pamusoro kuti udzidze zvimwe.
Jiangyin Jujie Rubber & Plastic Co, Ltd, yakavambwa muna 2007, ikambani ine hunyanzvi iri kushandisa gadzira uye kuvandudza silicone zvigadzirwa. Isu tinonyanya kugadzira mhando yepamusoro yesilicone hoses, silicone yekuisa micheka uye zvisimbiso zvemagetsi, zvemagetsi, mwenje, mishonga, chikafu, kemikari, mota, kuvaka ngarava, uye maindasitiri emichina.
1. Ndirini pandingawana iyo kotesheni?
Isu tinowanzo taura mukati memaawa makumi maviri nemana mushure mekuwana kubvunza kwako. Kana iwe uchikurumidza kwazvo kuti utore mutengo, ndapota tifonere isu kana utiudze isu muemail yako kuti isu tigoona yako yekutanga kubvunza.
2. Ndingaite sei kuti ndiwane sampuro yekutarisa yako mhando?
Isu tichakupa yedu iripo sampuro yekutarisa mhando yedu, asi mari yekutumira inoda kubhadharwa newe.
Kana mushure mekusimbiswa kwemutengo, unogona kuda kuti masampuli aongorore mhando yedu, asi sampuli yemutengo inoda kubhadharwa newe .Uye iyo sampuro yemutengo inogona kudzoserwa kana yako yakawanda kuraira huwandu hwasvika kuchikumbiro chedu.
3. Zvakadii nezve inotungamira nguva yekugadzira kwakawanda?
Kutendeseka, zvinoenderana nehukuru hwehuwandu uye zvigadzirwa zvaunoda. Kazhinji kutaura, tinokurudzira kuti utange kubvunza zvimwe mwedzi mumwe zuva risati rasvika raungade kuwana zvigadzirwa.
4. Ndeapi mazwi ako ekuendesa?
Isu tinobvuma EXW, FOB, CIF, nezvimwe. Unogona kusarudza iyo inonyanya kukosha kana inodhura kwauri.
Pashure: 2020 yakapfava silicone rabha chubhu isingamiriri silicone furo tubing kupisa kunodzikira
Zvadaro: Yakakwira mhando silicone yekuvaka zvinhu fiberglass mativi chubhu
2019 wakanaka wokutengesa kupisa nemishonga silicone furo tu ...
2019 yepamusoro yepamusoro silicone chubhu yekurapa kupisa sh ...
yakawanda-inoshanda yakavharwa sero furo silicone chisimbiso ...
Kutaridzika kwakanaka kupisa kupisa silicone foam tubin ...
yakanyanya tembiricha silicone grey furo machubhu akatungamirwa
mukurumbira furo rabha chipanji customized sili ...
Kwete 345, South Jingyang Road, Qingyang Town, Jiangyin, Wuxi, Jiangsu, China